ရော်ဘင်ဟာ ဘာ့ကြောင့် ကာရင်တန်ကို လာပြီးမှ ချဲလ်ဆီးကို ပြောင်းရွှေ့ သွားတာလဲ ? ရော်ဘင်ထက် ပိုကောင်းတဲ့ အသင်း ဖော် တစ်ဦး အမည်ကို ပြောကြားလိုက်တဲ့ ဖာဒီနန် - SPORTS MYANMAR
ရော်ဘင်ဟာ ဘာ့ကြောင့် ကာရင်တန်ကို လာပြီးမှ ချဲလ်ဆီးကို ပြောင်းရွှေ့ သွားတာလဲ ? ရော်ဘင်ထက် ပိုကောင်းတဲ့ အသင်း ဖော် တစ်ဦး အမည်ကို ပြောကြားလိုက်တဲ့ ဖာဒီနန်
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ ဂန္ဓဝင် ကစားသမား ဟောင်း ဖြစ်သူ ရီယို ဖာဒီနန် က နယ်သာလန် လက်ရွေးစင် အာဂျန် ရော်ဘင် ဟာ ကာရင်တန် လေ့ကျင့်ရေး ကွင်းထဲကို လာရောက် ခဲ့ပြီး မှ ပြိုင်ဖက် ဖြစ်တဲ့ ချဲလ်ဆီး အသင်း ဆီကို ပြောင်းရွှေ့ သွားခဲ့ ရတဲ့ အကြောင်း အရင်း က လေ့ကျင့်ရေး ကွင်းမှ အငွေ့အသက် တွေကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း ဆိုသွား ခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
အင်စတာဂရမ် မှာ လုပ်ဆောင် ခဲ့တဲ့ အမေး အဖြေ ကဏ္ဍ တစ်ရပ် မှာတော့ ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို ရဲ့ လက်အောက် မှာ တုန်းက ချဲလ်ဆီး အသင်း နဲ့ အတူ ပရီးမီးယား လိဂ် ဖလား2ကြိမ် ၊ လိဂ် ဖလား2ကြိမ် နဲ့ FA ဖလား 1 ကြိမ် ဆွတ်ခူး နိုင်ခဲ့တဲ့ ရော်ဘင် ရဲ့ ခြေစွမ်း တွေကို သူဟာ တစ်ကယ်ပဲ နှစ်သက်သူ ဖြစ်ကြောင်း ဖာဒီနန် က ဆိုသွား ခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
” တစ်ကယ့် ကစားသမား ကောင်း တစ်ယောက် ပါပဲ ။ ကျွန်တော် တို့ဟာ သူ့ကို ယူနိုက်တက် ဆီ ခေါ်ယူ နိုင်ခဲ့သင့် ပါတယ် ။ သူဟာ အသင်း ရဲ့ လေ့ကျင့်ရေး ကွင်းထဲ လာရောက်ခဲ့ ပါတယ် ။ ပြီးတော့ နေရာ အနှံ့ လှည့်ပတ် ကြည့်ရှု ခဲ့ပါ သေးတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူဟာ ကွင်းရဲ့ အငွေ့အသက် တွေကို မနှစ်သက် ခဲ့ဘူး လို့ ကျွန်တော် ထင် ပါတယ် ”
” ဒါ့ကြောင့် သူဟာ ချဲလ်ဆီး အသင်း ဆီကို ထွက်ခွာ သွားခဲ့ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော် အဲ့တာ ကို တစ်ကယ် ပဲ မယုံကြည် နိုင်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရ ပါတယ် ။ သူဟာ ကျွန်တော် တို့ အသင်း မှာ ရှိနေ ခဲ့ရင် သိပ်ပြီး ခမ်းနား နေမှာ အသေအချာ ပါပဲ ” လို့ ဖာဒီနန် က ဖြေကြား သွားခဲ့ ပါတယ် ။
2004 ခုနှစ် တုန်းက PSV အသင်း ကနေ ချဲလ်ဆီး အသင်း ဆီကို ပေါင် 12 သန်း နဲ့ ပြောင်းရွှေ့ ရောက်ရှိ လာခဲ့တဲ့ အာဂျန် ရော်ဘင် ဟာ လန်ဒန် ကလပ် မှာ 106 ပွဲ အထိ ပါဝင် ကစား ပေးခဲ့ပြီး ကိုယ်တိုင် 19 ကြိမ် ဂိုး သွင်းယူ ခဲ့ကာ 22 ကြိမ် ဂိုး ဖန်တီး ပေးနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
” ရော်ဘင် ဟာ သူ့ရဲ့ ဘယ်ဖက် အခြမ်း ကိုပဲ ဘောလုံး ဆွဲထုတ် ပြေးလိမ့်မယ် ဆိုတာ လူတိုင်း ကြိုတင် သိရှိ ခဲ့ကြ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဘယ် ခံစစ် ကစားသမား တိုင်းက အဲ့တာကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်း နိုင်ခြင်း မရှိ ခဲ့ကြ ပါဘူး ”
” အဲ့ဒီ တုန်းက စာချိုး တစ်ခု တောင် ထွက်ပေါ် ခဲ့ပါ သေးတယ် ‘ ငါရဲ့ ဘယ်ဖက် အခြမ်း ကိုပဲ ဘောလုံး ဆွဲပြေးမယ် ၊ မင်းတို့ ငါ့ကို ရပ်တန့် နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး ‘ ဆိုတာ ပေါ့ ။ တစ်ကယ်လည်း သူတို့ မရပ်တန့် နိုင်ခဲ့ကြ ပါဘူး ” လို့ ဖာဒီနန် က ရော်ဘင် ရဲ့ အရည်အသွေး ကို ချီးကျူး သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
ဖာဒီနန် ဟာ ရော်ဘင် ကို အထူး ချီးကျူး ခဲ့ ပေမယ့် အသင်းဖော် ကစားသမား ဖြစ်တဲ့ ရိုင်ယန် ဂစ်က နယ်သာလန် လက်ရွေးစင် ကစားသမား ဖြစ်သူ ထက် ပိုကောင်းတဲ့ ကစားသမား တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ ကြောင်း ဆက်လက် ထုတ်ဖော် ချီးကျူး သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
” ဂစ်ဂ်ဆီ ဟာ တစ်ကယ့် ကို မယုံကြည် နိုင်ဖွယ် ကောင်းတဲ့ ကစားသမား တစ်ဦး ပါပဲ ။ သူဟာ ဘယ် တောင်ပံ တိုက်စစ် ကစားသမား အဖြစ် ကနေ ကစားသမား ဘဝ ကုန်ဆုံး ကာနီး မှာ ဗဟို ကွင်းလယ် ကစားသမား အဖြစ် နေရာ ပြောင်းရွှေ့ ကစားခဲ့ဲ ပါတယ် ။ တစ်ကယ့် ကို ခမ်းနား လွန်းတဲ့ ကစားသမား တစ်ဦး ပါပဲ ”
” ရော်ဘင် က တစ်ကယ့် ကို ကောင်းမွန် လှတဲ့ ကစားသမား တစ်ဦး ပါ ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ကတော့ ဘယ်သူ ပိုကောင်းလဲ ဆိုရင် ဂစ် ကိုပဲ ရွေးချယ် သွားမှာပါ ” လို့ ဖာဒီနန် က အခိုင် အမာ ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
ရော်ဘင် ဟာ မော်ရင်ဟို လက်အောက် မှာ ကောင်းမွန် တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ တွေကို ပိုင်ဆိုင် ခဲ့တဲ့ နောက် 2008 ခုနှစ် မှာ ရီးယဲ မက်ဒရစ် အသင်း ဆီကို ပြောင်းရွှေ့ ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ နောက်2နှစ် အကြာ မှာ သူဟာ ဂျာမန် ထိပ်သီး ဘိုင်ယန် မြူးနစ် အသင်း ဆီကို ပြောင်းရွှေ့ ခဲ့ပြီး အောင်မြင်တဲ့ ကစားသမား ဘဝ ကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ပါဘလိုမာရီ အပြင် အခြား ဆော်ပိုလို ကစားသမား တစ်ဦးကိုပါ ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ်